Armenia: Herintaona taty aorian’ny ady noho ny fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2009 8:46 GMT
Anarivony ireo olona nidina andalamben’I Yerevana tamin’ny Alahady mba hitondra fahatsiarovana ny disadisa tao aorian’ny fifidianana tamin’ny herintaona lasa teo tao Armenia izay nahafaty olom-pirenena valo sy polisy anankiroa. Satria mbola ao ambadiky ny lalana ireo mpihetsiketsika manohitra, dia noampangaina marindrano ny governemanta tamin’ny andraikitra kely dia kely noraisiny mba ahafahana manao famotorana ho araka ny tokony ho izy ny ady saritaka.
Horonantsarin’ny A1plus tamin’ny fiandohan’ny hetsiketsika ny 1 Marsa 2009
Nahatadidy ilay tantara nitranga tamin’ny taona lasa i Unzipped, mpitoraka bolongana amin’ny antonony manohana ny mpanohitra.
Heritaona izao…. Henonay avy amin’ny mpitondra fanjakana Armenianina hatramin’izao ny teny tsotra ho an’ireo olona 10 maty tamin’ny 1 Marsa 2008 manao hoe “Azafady” sy ny hoe “Tena feno alahelo izahay” ….
Miasa saina ihany i Ditord tamin’ny herinandro vitsivitsy lasa teo fa mety tsy hilamina ny andro mandritra ny andro fahatsiarovana.
[…] Hita ohatrin’ny hoe tao anatin’ny hetsika fivorivoriana tsy niharan’ny sazy isika ny andron’ny 1 Marsa. Andao ary isika hiandrandra ny tsara indrindra, fa kosa mailo ihany manoloana ny ratsy…
Soa ihany fa nanoratra tao anatin’ny bolongana Front line ny mpandrindra Kokaziana avy amin’ny Global Voices Online manao hoe, nizotra tamim-pilaminana ny andro.
[…] Araka ny tatitra dia nohamafisina ny fiarovana ny lalana sasany mankeny an-drenivohitra izay ametrahan’ny polisy ireo tohana ary nanao fiantsonana nanakaiky ny lapa-panjakan’ny filoham-pirenena ireo fira feno andiana polisy. Ny fiara mpitondra rano koa etsy andaniny dia hita eny akaikin’I Yerevan Opera eny fa na dia tsy hoe vonona amin’ny hetsika ao Matenadaran aza ny polisy.
Ankoatra ny fotoana fohy taty aorian'ny fifandirana izay nandraisan’ny tafika ny fahefana tao anatin’ny toe-draharaha nandritra ny volana Marsa, dia nandeha nizotra tsy nisy olana ny tontolo andro
Manaiky sy manome ny fomba fijeriny ny bolongan’i A1Plus [AM], ivom-pampielezana Televiziona manohana ny mpanohitra
[…]Raha atao ny fijery malalaka dia ny olon’ny mpihetsiketsika sy ny mpikambana ao amin’ny polisy roa tonta mihitsy no samy miziriziry amin’ny heviny.
Kanefa [Ru], mampatsiahy ny mpamaky ny mpanao gazety Armenianina mipetraka any London fa betsaka ny fanontaniana no mijanona tsy ho voavaly.
- Mba lalam-panorenana ohatry ny ahoana re ny lalana mahakasika ny fahamaizana e?
-Afaka ampiasaina nanohitra ny mpanao fihetsiketsehana ve ny hery miaramila [niaraka tamin’ny polisy] (lalana iorenan’ny tafika ve ny mandeha manohitra ny olom-pirenena)?
- Iza no nibaiko ny fitifirana?
- Iza no nitifitra?
- Iza no maty?
- Hatraiza ny fetran’ny andraikitra manokana ananan’ireo karazana olona eo amin’ny roa tonta teo amin’ny zava-nitranga, indrindra indrindra, ny mahakasika ny famonoan’olona?
- Andraikitra araky ny lalana tahaka ny ahoana no ananan’ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohitra monoloana ny zava-mitranga?
Tany amin’ny faraparan’ny andro, nandefa bolongana faharoa indray I Unzipped ary niheritreritra lalina ny herisetra tamin’ny 1 Marsa 2008.
Na dia eo aza ny vokatra mampalahelo tsy manam-paharoa, na koa ny famerana ny fahafahan’ny olom-pirenena, na ny gadra politika, dia namokatra fampandrosana misimisy ihany ny fihetsiketsehana. Fifohazana tao anatin’ny torimason’ny vahoaka izy ity ary efa mihoatra ny folo taona lasa izao. Betsaka ny mahafinaritra, na dia hoe kely ihany aza, nandroso tokoa ny vondrom-bahoaka sy ny fanapahan-kevitra, indrindra indrindra ny manodidina ny tanora ary nananana ny tarigetra ho amin’ny fiaraha-monina vohizina amin’ny ara-pomba demokratika.
Araka ny hevitro, ny iray amin’ny voka-dehiben’ny fihetsiketsehana dia ny hoe nanomboka nihaino ny hevi-bahoaka ny governemanta Armeniana sy ny mpitondra fanjakana […]
29 Aogositra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy